စျေးကွက်၏မက်ခရိုစီးပွားရေး variable တွေကိုသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ? | စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး
Macroeconomic variable တွေကို
ကွဲပြားခြားနားသောနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် macroeconomic variable တွေကိုသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိဖို့နဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုသူတို့ဘယ်လိုသြဇာလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာသိဖို့။
ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ငါတို့သည်သင်တို့မက်ခရိုစီးပွားရေး variable တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုပြောပြသွားမယ် နှင့်စီးပွားရေး
1 Macroeconomic variables၊ ဘာအတွက်လဲ။
6 အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာမက်ခရိုစီးပွားရေး variable တွေကိုဘာတွေလဲ
7 တိုင်းပြည်တစ် macro ၏စီးပွားရေးမူကွဲအဖြစ်အလုပ်လက်မဲ့
10 မိုက်ခရိုစီးပွားရေး variable တွေကို: သူတို့ကဘာတွေလဲ?
Macroeconomic variables၊ ဘာအတွက်လဲ။
La macroeconomic variable တွေကို၏ရည်ရွယ်ချက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်လများအတွင်းတူညီသောနေရာ၌တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါ။ ဤကိန်းဂဏန်းများကိုထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ပြီးမြောက်သည် တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်အချို့သောညွှန်းကိန်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုအဆင့်နဲ့ဘယ်နေရာကို ဦး ဆောင်နေသလဲ။
ဤလေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်သင်သိနိုင်သည် အရာကုမ္ပဏီများသည်အကောင်းဆုံးအဆိုတော်ဖြစ်ကြသည် ထိုတိုင်းပြည်အတွင်းနှင့်မည်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်ထိုတိုင်းပြည်အတွင်း၌မည်သည့်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများရှိသည်ကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေရန်။
မက်ခရိုစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာခြင်းသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မက်ခရိုစီးပွားရေးသည်အရေးကြီးသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဖြစ်သည်သောအချက်များနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များမှတဆင့်ဘဏ္fiscalာရေးနှင့်ငွေကြေးတို့ဖြစ်သည်။
မှတဆင့် သင်ဟာအရာဝတ္ထုများ၏ကုန်ကျစရိတ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုသိနိုင်သည် macroeconomic variable တွေကို လွတ်လပ်သောစျေးကွက်အပေါ်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ။ စျေးနှုန်းများမတက်ရ၊ မကျသည့်အခါတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ကြောင်းနားလည်ထားသည်။
မက်ခရိုစီးပွားရေးမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေအားလုံးအတွက်အလုပ်အပြည့်အဝရရှိရန်ကြိုးပမ်းသည်။ Macroeconomics သည်နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်စံနှုန်းအားလုံးကိုလေ့လာရန်အာရုံစိုက်သည် ကမ္ဘာ၏အခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူ။
သိရန်လုပ်သောဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း macroeconomic မူကွဲလက်ရှိစီးပွားရေးသို့မဟုတ်အနာဂတ်စီးပွားရေးအပေါ်မည်သည့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုမဆိုဆုံးဖြတ်ရန်၎င်းတို့အားအမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
ပြည်ပမှရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုလက်ခံသောအခါ၊ ရောင်းချသည့်အစိုးရသည်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ ရောင်းချသည့်အစိုးရသည်ဤအန္တရာယ်ကိုနှစ်ဆတိုးစေသည်။
စီမံကိန်းအတွင်းမျှော်လင့်ထားသည့် ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်လည်း၎င်းကိုသုံးနိုင်သည် တိုင်းပြည်၏စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်၏အန္တရာယ်နှင့်ကိုက်ညီသောလျှော့စျေးနှုန်း။
ထိုသို့လုပ်ရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည် တစ် ဦး ချင်းစီစီမံကိန်းများအတွက်ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုညှိ ကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်းများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ setting ကို၏အသုံးပြုမှုကိုပါစေ။
ဘယ်အချိန်မှာလက်ခံသလဲ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရောင်းချသည့်အစိုးရသည်ကုမ္ပဏီများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း (သို့) ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
စီမံကိန်းအတွင်းမျှော်လင့်ထားသည့် ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုကိုပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်လည်း၎င်းကိုသုံးနိုင်သည် လျှော့စျေးနှုန်းများ တိုင်းပြည်၏စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်၏အန္တရာယ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းမှာစီမံကိန်းအမျိုးမျိုးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုကိုအသုံးပြုသောတစ် ဦး ချင်းစီမံကိန်းများမှငွေကြေးစီးဆင်းမှုကိုညှိခြင်းဖြစ်သည်။
အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာမက်ခရိုစီးပွားရေး variable တွေကိုဘာတွေလဲ
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ပါမည် အရေးအပါဆုံး macroeconomic variable တွေကို:
မက်ခရိုစီးပွားရေး variable များအတွင်းစဉ်းစားပထမ ဦး ဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည် ဂျီဒီပီ။ ဤသည်မှာကုမ္ပဏီများမှထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံ၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းဒေသအတွင်းတွင်အလုပ်လုပ်သူများကိုလည်းရေတွက်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ပါ ၀ င်သည့်စီးပွားရေး၏ကဏ္primaryများမှာမူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့်တတိယအဆင့်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးရှိသည် အစစ်အမှန် macroeconomic variable ကို, ထိုတိုင်းပြည်များတွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးသူတို့ရောင်းချခဲ့ကြသည်ဖြစ်စေမရှိမရှိ, ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံး၏ပေါင်းလဒ်လည်းပါဝင်သည် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ ဥပမာအားဖြင့်၊ စပိန်နိုင်ငံရဲ့ variable ကိုကျွန်တော်တို့ရှာနေမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်။
စွန့်စားမှုပရီမီယံသို့မဟုတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အန္တရာယ်၊ ၎င်းသည် macroeconomic မျိုးကွဲများကိုတွက်ချက်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ဒုတိယအရာဖြစ်သည်။ စွန့်စားရမှုပရီမီယံဆိုသည်မှာနိုင်ငံ၏ကြွေးမြီကို ၀ ယ်ယူသောအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပေးသောပရီမီယံဖြစ်သည်။
မည်သည့်တိုင်းပြည်တွင်မဆိုငွေချေးစာချုပ်များဝယ်ယူရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံးကဤအပိုကုန်ကျငွေကိုလိုအပ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိရန်အတွက်နိုင်ငံများသို့ ၀ ယ်ရန်အန္တာရာယ်ရှိသည့်အခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားသာလွန်ကောင်းမွန်သောအမြတ်အစွန်းကိုပေးသည်။
နိုင်ငံအားလုံးသည်လဲလှယ်ထားသောငွေချေးစာချုပ်များကိုထုတ်ပေးသည် အလယ်တန်းစျေးကွက် နှင့်အတိုးနှုန်းဝယ်လိုအားအရသိရသည်သတ်မှတ်ထားသည်။ ပရီမီယံကိုဂျာမနီမှထုတ်ဝေသောနိုင်ငံများနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့၌ရှိသော ၁၀ နှစ်စာချုပ်များအကြားခြားနားချက်မှတွက်ချက်သည်။
ငွေဖောင်းပွမှုတစ်ခုဖြစ်သည် macroeconomic variable တွေကို ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာစျေးနှုန်းများကိုယေဘူယျအားဖြင့်တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်နှစ်အကောင့်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းသည်နိုင်ငံ၏ကုန်ပစ္စည်းများသာမက ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးပါ ၀ င်သည်။
အတွင်း ငွေကြေးဖောင်းပွမှုများစွာရှိပါတယ်။ အဓိကတစ်ခုဖြစ်သည် ဝယ်လိုအား၊ တိုင်းပြည်တစ်ခု၏ ၀ ယ်လိုအားတိုးလာသော်လည်းတိုင်းပြည်ကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးလျှင်စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာသည်။
ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်သည် ပေးသွင်း။ ဒီလိုဖြစ်လာရင်ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့စရိတ်ကတိုးလာပြီးအမြတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဈေးတွေတက်လာတယ်။
အားဖြင့် လူမှုရေးအကြောင်းတရားများ။ အနာဂတ်တွင်စျေးနှုန်းများပိုမိုမြင့်တက်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းတို့၏အချိန်မတိုင်မီ ပို၍ စျေးကြီးစွာအားသွင်းရန်ဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာမက်ခရိုစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခြားအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်၊ ဗဟိုဘဏ်ကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုးနှုန်းများမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အစိုးရကငွေများကိုဘဏ်များသို့ချေးပြီးထိုဘဏ်များသည်အခြားဘဏ်များသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီကိုပေးသည်။
အတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက် မက်ခရိုစီးပွားရေး variable တွေကိုငွေလဲနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ငွေလဲနှုန်းသည်အဓိကကျသောငွေကြေးနှစ်ခုအကြားတိုင်းတာသည်။ ဤအချက်ကိုဥရောပဗဟိုဘဏ်ကဆုံးဖြတ်သည်။ ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည်တိုင်းပြည်၏ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးဖြတ်ထားခြင်းရှိမရှိသိရန်အရေးကြီးသည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငွေပေးချေမှုလက်ကျန်ငွေ မက်ခရိုစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုများကိုသိရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းကိုအမြဲသတိရသင့်သည်။ ဤနေရာတွင်ရေတွက်ရမည့်အချက်မှာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နှစ်ဖြစ်သောအချိန်အတိအကျကာလအတွင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ဘဏ္flowsာရေးစီးဆင်းမှုဖြစ်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးချိန်ခွင်လျှာ။ ကုန်သွယ်မှုဟန်ချက်သည်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများနှင့် ၀ င်ငွေအမျိုးအစားများတင်ပို့မှုကိုတွက်ချက်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏လက်ကျန်ငွေ။ ဤတွင်ကုန်သွယ်ရေးလက်ကျန်ငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်ကျန်ငွေဖြည့်ထားသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု၊ ကုန်တင်၊ အာမခံနှင့်ခရီးသွား ၀ န်ဆောင်မှု၊ ၀ င်ငွေအမျိုးမျိုးနှင့်နည်းပညာအကူအညီများပါ ၀ င်သည်။
လက်ရှိအကောင့်လက်ကျန်ငွေ။ လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သောစစ်ဆင်ရေးများအပြင်နိုင်ငံ၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။ ဤချိန်ခွင်လျှာတွင်တိုင်းပြည်သို့ရောက်ရှိလာသောရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၊ နိုင်ငံများစွာသို့ပေးအပ်သည့်နိုင်ငံတကာအကူအညီများသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသို့လှူဒါန်းမှုများလည်းပါ ၀ င်သည်။
တိုင်းပြည်တစ် macro ၏စီးပွားရေးမူကွဲအဖြစ်အလုပ်လက်မဲ့
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လက်မဲ့ဆိုသည်မှာသတ်မှတ်ထားသည့်တိုင်းပြည်ရှိအလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ အလုပ်လက်မဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့အလုပ်လုပ်ချင်သူဖြစ်ပေမယ့်အလုပ်ရှာလို့မရတဲ့သူ၊ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့သူတိုင်းကအဲဒီအချိန်တုန်းကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
သိရန် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း, အလုပ်လက်မဲ့များ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုတက်ကြွသောလူ ဦး ရေရဲ့ပမာဏအပေါ်သိမ်းယူရမည်ဖြစ်သည်။
လူတစ် ဦး အားလုပ်သားအင်အားသို့ ၀ င်ရန်ပြောရန်သူတို့သည်အသက် ၁၆ နှစ်ကျော်ရမည်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကိုတိုင်းတာနိုင်သည့်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ပြည်နယ်အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အလုပ်သမားအင်အားစစ်တမ်းများဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ထောက်ပံ့ရေးညွှန်းကိန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြောသောသူများဖြစ်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကမ်းလှမ်းမှု။ ဤအညွှန်းကိန်းများထဲတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ရေးညွှန်းကိန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးညွှန်းကိန်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုညွှန်းကိန်းများပါဝင်သည်။
၀ ယ်လိုအားညွှန်းကိန်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းတို့သည်စားသုံးမှုညွှန်းကိန်းများ၊
ဒီမော်ဒယ် စီးပွားရေးပစ္စုပ္ပန်သတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားပါ ကာလတစ်ခု၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လက်ရှိစျေးနှုန်းများကိုစုစုပေါင်းရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်ယူမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးနှုန်းအတက်အကျအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာရန်အတွက်အခြေခံကျသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်္ချာပုံစံဖြင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာမှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးမူဝါဒများ၏အကျိုးဆက်များကိုနားလည်ရန်နှင့်မက်ခရိုစီးပွားရေးဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုသည်။
စုစုပေါင်းဝယ်လိုအား: ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စျေးကွက်၏ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂလိကစားသုံးမှု၊ ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ်များနှင့်အသားတင်ပို့ကုန်ပွင့်လင်းသောစီးပွားရေးအခြေအနေများ (တင်ပို့မှုမှအနှုတ်တင်သွင်းမှု) တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ကမ်းလှမ်းချက်များထည့်သွင်းထားသည်: ဒါဟာပျမ်းမျှစျေးနှုန်းများမှာကမ်းလှမ်းသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများစုစုပေါင်းပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီပုံစံကိုငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ ကြီးထွားမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှုနှင့်ငွေကြေးမူဝါဒကအခန်းကဏ္playsကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အသုံးပြုသည်။
မိုက်ခရိုစီးပွားရေး variable တွေကို: သူတို့ကဘာတွေလဲ?
သူတို့အား variable တွေကိုဖြစ်ကြသည် တစ် ဦး ချင်းစီစီးပွားရေးအပြုအမူကိုစိုးရိမ်။ ၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီများနှင့်စားသုံးသူများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ အလုပ်သမားများနှင့်စျေးကွက်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခံရဖို့ကစားသို့ဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများများသောအားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများ, စျေးနှုန်းများ, စျေးကွက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးအေးဂျင့်များဖြစ်ကြသည်။
ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ချင်းစီကိုလေ့လာခြင်းအပေါ် မူတည်၍ အချို့သောလေ့လာမှုများသို့မဟုတ်အခြားသူများသည်လျှောက်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်စားသုံးသူများတွင်စားသုံးသူသီအိုရီကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ၏အသုံး ၀ င်မှု၊ စားသုံးမှုဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှစပြီးသင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အလားတူစွာကုမ္ပဏီများအတွက်ထုတ်လုပ်သူ၏သီအိုရီသည်ထုတ်လုပ်မှု၊ အမြတ်ငွေတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုတွက်ချက်သည်။ စျေးကွက်အတွက်မူပြီးပြည့်စုံပြီးမစုံလင်သောယှဉ်ပြိုင်မှုပုံစံနှင့်ပုံစံများကိုဆန်းစစ်လေ့ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » အကြပ်အတည်း » Macroeconomic variable တွေကို
Carmen Juliana VERDESOTO CHANGO ဟုသူကပြောသည်
ငါအလေးအနက်ထားသောစီးပွားရေး၏ကွဲပြားသောလယ်ပြင်၌သင်တို့၏ KRITERIA ကဲ့သို့ပင်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများအကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ကျောင်းသားဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏စာစောင်များသည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်အကိုင်တွင်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
SUSANA URBANO ဂုဏ်ယူပါတယ် ..
ငါ ECUADOR မှပါ။
CARMEN JULIANA VERDESOTO CHANGO သို့စာပြန်ပါ
ဤစာပမြေားများသည်လူသားအားလုံးကိုဖတ်သင့်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။ နိုင်ငံအသီးသီး၏စီးပွားရေးအခြေအနေမည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုစဉ်းစားရန်မည်မျှအရေးကြီးသည်၊ ကွီတိုမှအီကွေဒေါမှနှုတ်ဆက်သည်။
ကားလို့စ် R. Grado Salayandia ဟုသူကပြောသည်
စီးပွားရေး variable တွေကိုအသုံးပြုမှုတိုင်းပြည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, အစစ်အမှန်သတင်းရင်းမြစ်ရှိသည်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စီးပွားရေးစီးပွါးရေးသည်အနာဂတ်လက်တွေ့ဖြစ်စဉ်နှင့်နီးကပ်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီးထိုပြောင်းလဲမှုများ၏ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်ရန်အတွက်အခြေခံစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အချိန်မှန်ရည်ရွယ်ချက်များ၊ သူတို့၏အမှန်တကယ်နှင့်အချိန်မီလမ်းကြောင်းကိုသိရှိရန်၊ ပြည့်စုံသောအမျိုးသားစီးပွားရေးအစီအစဉ်များနှင့်ခန့်မှန်းချက်များကိုပြင်ဆင်ရန်၊ ထို့အပြင်စီးပွားရေးယူနစ်များ၏စီးပွါးရေးတွင်သူတို့၏လမ်းကြောင်း၊ ရလဒ်နှင့်အခြကိုသိရန်တိုင်းတာခြင်းယန္တရားများတည်ထောင်ရန်။
Carlos R. Grado Salayandia ကိုပြန်ပြောပါ